2 Makoronike 11:1-23
11 Rehobhoamu paakasvika kuJerusarema,+ akabva aunganidza imba yose yaJudha neyaBhenjamini,+ varume vakasarudzwa nokuda kwehondo,+ zviuru zana zvine makumi masere, kuti vanorwisa Israeri, vadzorere umambo kuna Rehobhoamu. 2 Shoko raJehovha rakabva rasvika kuna Shemaya+ munhu waMwari wechokwadi, richiti: 3 “Iti kuna Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni mambo waJudha+ nokuvaIsraeri vose vari pakati paJudha naBhenjamini, 4 ‘Zvanzi naJehovha: “Musaenda kunorwisa hama dzenyu.+ Mumwe nomumwe ngaadzokere kumba kwake, nokuti chinhu ichi chaitika zvichibva kwandiri.”’”+ Naizvozvo vakateerera shoko raJehovha, vakarega kunorwisa Jerobhoamu.+ 5 Rehobhoamu akaramba achigara muJerusarema, akavaka maguta akavakirirwa muJudha. 6 Nokudaro akavakazve Bhetrehema+ neEtamu+ neTekoa,+ 7 neBheti-zuri+ neSoko+ neAdhuramu,+ 8 neGati+ neMarisha+ neZifi,+ 9 neAdhoraimu neRakishi+ neAzeka,+ 10 neZora+ neAijaroni+ neHebroni,+ maguta akanga akavakirirwa, aiva pakati paJudha naBhenjamini. 11 Akasimbisawo nzvimbo dzakanga dzakavakirirwa,+ akaisa vatungamiriri+ madziri nemigove yezvokudya nemafuta newaini, 12 uye akaisa nhoo huru+ nemapfumo marefu+ mumaguta ose akasiyana-siyana; uye akaasimbisa kwazvo. Judha naBhenjamini vakaramba vari vake. 13 Vapristi nevaRevhi vakanga vari pakati paIsraeri wose vakabva kunharaunda dzavo dzose vakamutsigira. 14 Nokuti vaRevhi vakasiya mafuro avo+ nezvinhu zvavo+ vakabva vaenda kuJudha nokuJerusarema,+ nokuti Jerobhoamu+ nevanakomana vake vakanga vavadzinga+ kuti varege kushanda sevapristi vaJehovha. 15 Iye akagadza vapristi venzvimbo dzakakwirira+ nevemadhimoni akaita sembudzi+ nevemhuru dzaakanga agadzira pabasa racho.+ 16 Vaya vakanga vachiisa mwoyo yavo pakutsvaka Jehovha Mwari waIsraeri vakavatevera vakauya kuJerusarema+ vachibva kumadzinza ose aIsraeri kuti vazobayira+ kuna Jehovha Mwari wemadzitateguru avo. 17 Vakaramba vachisimbisa umambo hwaJudha+ uye vachitsigira Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni kwemakore matatu, nokuti vakafamba munzira yaDhavhidhi naSoromoni kwemakore matatu.+ 18 Rehobhoamu akabva atora Maharati mwanasikana waJerimoti mwanakomana waDhavhidhi kuti ave mudzimai wake, nowaAbhihairi mwanasikana waEriyabhi+ mwanakomana waJese. 19 Kwapera nguva yakati, akamuberekera vanakomana, Jeushi naShemariya naZahamu. 20 Pashure pake akatora Maaka+ muzukuru waAbsaromu.+ Kwapera nguva yakati, akamuberekera Abhija+ naAtai naZiza naSheromiti. 21 Rehobhoamu aida Maaka muzukuru waAbsaromu kupfuura mamwe madzimai ake ose+ nevarongo vake; nokuti akanga awana madzimai gumi nemasere, nevarongo makumi matanhatu, zvokuti akabereka vanakomana makumi maviri nevasere nevanasikana makumi matanhatu. 22 Naizvozvo Rehobhoamu akagadza Abhija mwanakomana waMaaka kuti ave mukuru, ave mutungamiriri pakati pehama dzake, nokuti aifunga zvokumugadza kuti ave mambo. 23 Asi akaita nokunzwisisa,+ akaparadzira vamwe vanakomana vake kunyika dzose dzaJudha naBhenjamini,+ kumaguta ose akanga akavakirirwa,+ akavapa zvokudya zvakawanda,+ akavawanira madzimai mazhinji.+